कोरोना देखाएर कांग्रेसभित्र ‘हानिकारक’ हर्कत, डा. शेखरको अडानले बुढानिलकण्ठमा हंगामा – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना देखाएर कांग्रेसभित्र ‘हानिकारक’ हर्कत, डा. शेखरको अडानले बुढानिलकण्ठमा हंगामा
कोरोना देखाएर कांग्रेसभित्र ‘हानिकारक’ हर्कत, डा. शेखरको अडानले बुढानिलकण्ठमा हंगामा
काठमाडौं – विश्वभर त्रासको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई देखाएर कांग्रेसभित्र हानिकारक हर्कत भइरहेको खुलासा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा लोकप्रिय नेता डा. शेखर कोइरालाले गरेका छन् ।कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठन नेपाल प्रेस युनियनको चैत २१ र २२ गते नेपालगञ्जमा हुने भनी तोकिएको महाधिवेशन कोरोनालाई देखाएर रोक्ने आशंका भइरहेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले युनियनको अधिवेशन रोक्न खोजेको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । महाधिवेशनमा देउवा समूहका पत्रकारको अवस्था कमजोर हुने आकलनपछि महाधिवेशन रोक्ने चलखेल भइरहेको संकेत पाएपछि डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै महाधिवेशन रोक्न नहुने अडान लिएका छन् ।
कांग्रेसभित्र लोकप्रिय नेताको छवि बनाएका शेखरले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा हंगामा उत्पन्न भएको छ । महाधिवेशन सार्ने तरखरमा रहेका देउवालाई शेखरको अडानले धक्का लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
कोइरालाले लेखेका छन्, ‘कोरोना भाइरसका सन्त्रासको कारण नेपाल प्रेस युनियनको आसन्न महाधिवेशन रोकिने हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । यस्ता विपत्ति समयसमयमा आई नै रहन्छन् । यी कुराको आधारमा पार्टी र यस मातहतका संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु संगठनकै लागि हानिकारक हो । हामी परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्केर व्यावहारिक र वैज्ञानिक बाटोतर्फ जानुपर्छ । बार एसोसिएसन, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र चिकित्सक संघले अपनाएको जिल्ला–जिल्लाबाटै मतदान गर्ने विधि अपनाएर प्रेस युनियनको महाधिवेशन गरिनुपर्छ । यसले आर्थिक बोझ कम हुन्छ, जिल्लाका साथीहरूलाई महाधिवेशन स्थलसम्म जानुपर्दैन र पारदर्शी तथा निष्पक्ष पनि हुन्छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि सातौं महाधिवेशनसम्म यही प्रक्रिया अपनाएको थियो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । समय र परिस्थिति अनुसार हामीले आफू र सांगठनिक संरचनालाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ ।’
महाधिवेशनको चटारोमा रहेको नेपाल प्रेस युनियन मोरङका सभापति कुमार लुइँटेलले समेत तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले कोरोनाको खतराबाट बच्न जिल्ला–जिल्लाबाट मतदान गरेर युनियनको नेतृत्व चयन गर्न सकिने उपाय सुझाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै लुइँटेलले भनेका छन् –
महाधिवेशन कुनै बहानामा रोकिनु हुन्न । कोरोनाको डर हो भने महाधिवेशनको चुनाव यसरी गर्न सकिन्छ । महाधिवेशन गरौं न किन रोक्ने ?
१) महाधिवेशनको उद्घाटन काठमाडौमै गर्ने । जिल्लागत रुपमा ब्यालेट बक्स राख्ने त्यतैबाट मत खसाल्ने प्रबन्ध गर्ने । यसको व्यवस्थापन जिल्लास्थित प्रेस युनियनको शाखाले गर्ने ।
२) प्रदेशगत रुपमा गर्ने हो भने सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका सबै जिल्लाका पार्षदहरु सहभागी गराई चुनाव गराउने । यसमा युनियनका तत्कालीन क्षेत्रीय समितिहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । जस्तो कि प्रदेश १ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल समिति अन्यत्र तत् क्षेत्रीय समितिहरु यसमा सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिले सघाउने । यसो गरे पार्षदको संख्या धेरै हुँदैन । भिंडभांड भयो भन्ने पनि भएन ।
३) संघीय राजधानीमै महाधिवेशनका उमेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने गराउने । प्रदेशका उमेदवारलाई यतै मनोनयनको व्यवस्था गर्ने । यो उपाय अपनाउने हो भने बजेट पनि अहिले अनुमान गरिए जति खर्च हुँदैन । जिल्ला वा प्रदेश आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
४) मतदान जिल्ला वा प्रदेशमा भईसकेपछि यतै गणना गर्ने प्रबन्ध गर्ने । गणनापछि जोड्ने विजयी उमेदवार घोषणा गर्ने । सपथ काठमाडौमै गर्ने । जय नेपाल
सभापति नेपाल प्रेस युनियन मोरङ
मास्क प्रयोग गरिसकेपछि जथाभावी फाल्ने प्रवृतिले कोरोनाको जोखिम बढ्दो
भखरै गयो जापानमा शक्तिशाली भूकम्प
नेपालीको वास्तविक हिरो कुलमानलाई विदाई गर्दा देखिए यस्ता दृश्यहरु, हेर्नुहोस् तस्विर
यस्तो डरलाग्दो योजनासहित २ भारतीय नागरिक विमानस्थलबाट समातिए